Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah 24 May
HomeWararka CiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah 24 May
May 24, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Maanta oo aad Maalin kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com
Real Madrid ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato weeraryahanka Manchester City iyo xulka England Raheem Sterling, oo 27 jir ah, ka dib markii laga diiday 23 jirka weerarka uga ciyaara Paris St-Germain Kylian Mbappe. (Star)
Mbappe ayaa sheegay in uu sidoo kale kala hadlay Liverpool wax ku saabsan suuqa kala iibsiga ka hor inta uuna go’aansan in uu la sii joogo kooxda hogaanka U haysa horyaalka France ee PSG. (Telegraph)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds iyo xulka England Kalvin Phillips, oo 26 sanno jir ah, ayaa u soo muuqday bartilmaameedka ugu sarreeya Manchester City xagaaga iyagoo doonaya inay beddelaan xiddiga khadka dhexe ee Brazil Fernandinho, 37.(Mail)
Tottenham ayaa kula tartami doonta kooxda ay xifaaltamaan ee Arsenal saxiixa weeraryahanka Brazil Gabriel Jesus, oo 25 jir ah, kana tirsan Manchester City. (Telegraph)
Tottenham ayaa ku sii dhawaanaysa in ay si xor ah kula wareegto 34 jirka kooxda Southampton iyo xulka qaranka England ee Fraser Forster. (Mail)
Tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten Hag ayaa si cad u sheegay inuu doonayo weeraryahanka Portugal Cristiano Ronaldo, oo 37 jir ah, inuu sii joogo xilli ciyaareed kale. (Metro)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester iyo Belgium Youri Tielemans, oo 25 jir ah, ayaa ka mid ah bartilmaameedyada ugu horreeya ee tababaraha Arsenal Mikel Arteta xagaagan. (Telegraph)
Arsenal ayaa isku dayi doonta in ay iska iibiso ilaa 7 ciyaartoy oo kooxda kowaad xagaagan ah oo ay ku jiraan 27 jirka daafaca uga ciyaara Spain Hector Bellerin iyo 30 jirka Germany u ilaaliya Bernd Leno. (Sun)
Juventus ayaa sare u qaaday isku dayga ay ku dooneyso 24 jirka daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal ee Gabriel. (Mirror)
Tababaraha Napoli Luciano Spalletti ayaa ku adkeysanaya in kooxdu aysan awoodin inay iska iibiso 30-jirka diirada u saaran Chelsea iyo daafaca Senegal Kalidou Koulibaly. (Star)
Leeds ayaa qarka u saaran inay 23 milyan ginni kula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee USA Brenden Aaronson, oo 21 jir ah, kana tirsan Red Bull Salzburg . (Times )
Tababare Patrick Vieira ayaa sheegay in Crystal Palace ay jeclaan lahayd inay 22 jirka khadka dhexe ee England Conor Gallagher ku soo celiso Selhurst Park xilli ciyaareedka soo socda. (Star)
Daafaca Spain Marcos Alonso, oo 31 jir ah, ayaa weydiisan doona inuu ka tago Chelsea, isagoo heshiis la gaaray Barcelona . (Sport – in Spanish)
Everton iyo Leicester ayaa doonaya inay la soo saxiixdaan 29-jirka Burnley iyo daafaca dhexe ee England James Tarkowski. (90 min)
Everton ayaa Tarkowski u soo bandhigtay heshiis uu ku qaadanayo 120,000 oo Gini todobaadkii. (Football Insider)
Newcastle ayaa isha ku haysa 24 jirka daafaca uga ciyaara Atletico Madrid iyo Brazil Renan Lodi. (Chronicle)
Daafaca Chelsea Andreas Christensen, 26, ayaa lagu dhawaaqi doonaa inuu yahay ciyaaryahan Barcelona maalmaha soo socda. Qandaraaska uu ku joogo Stamford Bridge wuxuu dhacayaa bisha June. (AS – in Spanish)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark Christian Eriksen, oo 30 jir ah, ayaa waxaa la soo xiriiray seddex kooxood oo Premier League ah, isagoo qandaraaskiisa waqtiga gaaban ee Brentford uu dhammaanayo. (Fabrizio Romano)
Maamulaha West Ham David Moyes ayaa ka dhawaajiyay xagaaga dib u habeyn weyn lagu sameyn doono inkastoo xilli ciyaareedkooda uu yahay mid dhiirogelin leh. (Standard)